पूजा गर्दा यो दिशामा दियो-बत्ति बाल्दा बढ्छ आयु ! - dautarimedia.com
पूजा गर्दा यो दिशामा दियो-बत्ति बाल्दा बढ्छ आयु !
काठमाडौँ । हिन्दु धर्मअनुसार पूजाआज गर्दा सुरुमा नै बत्ती बाल्ने चलन रहेको छ । हरेक पूजा आज गर्नु पूर्व दियोमा बत्ती बाल्नु शुभ मानिन्छ । यसरी दियो बाल्नाले घरमा शान्ति मिल्नुको साथै दुख क’ष्ट छुटकारा हुने विश्वास रहेको छ । यसरी दियो बाल्नुको धार्मिक र बौद्धिक दुवै कारणहरु हरेका छन् ।
हर्नुहोस् यस्तो छ धार्मिक कारण : पूजामा दियो बाल्नुको बिशेष महत्व रहेको छ । यसरी दियो बाल्नुको अर्थ जीवन भएको अन्धकार हटाइ ज्ञानको ज्योति ल्याउनु रहेको छ । अझ भन्ने हो भने आरती गर्दा घ्यूमा बत्ति बाल्दा सुख र सम्पति मिल्ने विश्वास गरिएको छ । हरेक दिन यसरी दयो बाल्नाले घरमा लक्ष्मीको बास हुने धार्मिक विशेषता रहेको छ ।
पूजाआजा गर्दा सुरुमा नै दियो बाल्नुको यस्तो छ कारण : यदि गाईको घ्यूमा बत्ती बाल्नाले घरवरपरको वातावरणलाई शुद्ध बनाउँछ । घ्यूउमा जीवाणुलाई मा’र्न सक्ने गुण भएको कारण घ्यूको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ । पूजा नभएपनि दियो बाल्नु शुभ हुने बैज्ञानिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
हरेक दिन दियो बाल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु : घरमा दियो बाल्दा पूर्व दिशातिर फर्काएर बाल्नाले आयु बढ्छ भने दियो पश्चिम फर्काएर बाल्नाले दु ख बढ्छ भन्ने विश्वास रहेको छ । दियो बालेर दक्षिण तिर फर्काएर राख्नाले धनजनको हा’नी भएकाले दियोको मुख भाग सधै पुर्व फर्काएर बाल्नुपर्ने धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
हरेक पूजा आज गर्नु पूर्व दियोमा बत्ती बाल्नु शुभ मानिन्छ । यसरी दियो बाल्नाले घरमा शान्ति मिल्नुको साथै दुख क’ष्ट छुटकारा हुने विश्वास रहेको छ । यसरी दियो बाल्नुको धार्मिक र बौद्धिक दुवै कारणहरु हरेका छन् । जस्को केही जानकारी माथी दिईसकेका
Previous: पाथीभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन भदौ ८ गते आज मंगलबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल !
Next: बोराभित्र कोचेर फालिएको अवस्थामा मानिसको घुँडा र खुट्टाको भाग भेटियो